पढ्नका लागि भारत पठाइएका छोरा ५ वर्षपछि छोरी बनेर फर्किए, प्रहरीसँगको बयानले गाउँले झन च’कित ! – Namaste Host
पढ्नका लागि भारत पठाइएका छोरा ५ वर्षपछि छोरी बनेर फर्किए, प्रहरीसँगको बयानले गाउँले झन च’कित !
March 3, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on पढ्नका लागि भारत पठाइएका छोरा ५ वर्षपछि छोरी बनेर फर्किए, प्रहरीसँगको बयानले गाउँले झन च’कित !
काठमाडौ– सुन्दर भविष्य सोचेर भारत पठाइएको छोरो पाँच वर्षपछि छोरी बनेर फर्किँदा बाबुआमा मात्र होइन गाउँले नै चकित परेका छन् ।कन्चनपुरमा एउटा यस्तै घटना भएको छ । बाबुले छोरोलाई पढ्नको लागि भारत पठाए ।
तर पछि फर्किँदा छोरो त छोरी बनेर फर्किइन् । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ दोमिल्लाका १७ वर्षे सुरेन्द्र माल २०७१ सालमा १२ कक्षा पढेर बुवासँगै भारत गए । भारतमा कम्प्युटर सिकेर उज्ज्वल भविष्य बनाउने उनको सपना थियो । ५ वर्षपछि घर फर्किंदा उनी ‘केटी’ प्रियंका बनेकी छन् । प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेपछि घटना सार्वजनिक भएको हो ।
सुरेन्द्रले ६ महिनासम्म कम्प्युटर सिके, बुवा कहिलेकाहीँ आउने–जाने गर्थे । ‘को–को आएर बढी तलब दिन्छु भनेर छोरा सुरेन्द्रलाई लगेर गएछन्,’ बुवा जयराजले भने, ‘भारतको जम्मुकस्मिर पुर्‍याए छन् ।’ उनलाई तेस्रो लि ङ्गीहरूको समूहले त्यहाँ पुर्‍याएर बन्दी समेत बनाएको बाबुले बताएका छन् । त्यसपछि उनलाई २०७२ सालमा चिनेजानेका एक जनाले घर फिर्ता ल्याएका थिए ।’
दोस्रोपल्ट भारत गएका सुरेन्द्र घरपरिवारको नियमित सम्पर्कमा थिएनन् । एक्कासी गत असार महिनामा सुरेन्द्र केटीजस्तै देखिने ‘प्रियंका’ भएर कृष्णपुरको दोमिल्लास्थित घर फर्किए । उनीसँगै भारतीय मुस्लिम नागरिक नइम पनि आएका थिए । बुवा जयराजका अनुसार सुरेन्द्र अहिले २२ वर्षका भए, तर उनी सुरेन्द्र होइन, प्रियंका बनेका छन् ।सुरेन्द्र प्रियंका कसरी बने ?
बाबुका अनुसार छोरा सुरेन्द्रलाई तेस्रोलिंगीहरुले नियन्त्रणमा लिएर यस्तो गरेका हुन् । उनले भने, ‘केटालाई केटी बनाएर विभिन्न रेस्टुरेन्ट बारमा नाच्न लगाउने रहेछन्, लामो समय नियन्त्रणमा राखेर नचाउँदै पैसा कमाउने उनीहरुको धन्दा रहेछ ।’ उजुरी परेपछि घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । भारतीय नागरिक नइमले आफूलाई लि ङ्ग परिवर्तन गराउनेको पञ्जाबाट मुक्त गरेर ल्याएको प्रियंकाले बताएकी छिन् । गोर्खाली खबर बाट
यो पनि , फुड सप्लिमेन्टकाे खरिद बिक्रीमा समस्या
काठमाडाैं । फुड सप्लिमेन्टको विषयले अप्ठ्यारो पारेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बिहीबारको बैठकमा खाद्य ऐन २०२३, औषधी ऐन २०३५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्तर्गतका प्रत्यायोजित विधायन साथै आहारपूरक खाद्य पदार्थको नियमनको सम्बन्धमा सरोकारवालासँगको छलफलका क्रममा सरोकारवालाहरुले फुड सप्लिमेन्टको विषयले अप्ठ्यारो पार्ने गरेको बताएका हुन् ।
नेपाल औषधी व्यवसायी संघका महासचिव रामचन्द्र शर्माले फुड सप्लिमेन्टको विषयले औषधी व्यवसायीहरु पीडित भएको बताउनुभयो । औषधी व्यवस्था विभागले प्रतिबन्धित भन्ने गरेको भएपनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा दर्ता भएको तथा चिकित्सकको प्रेस्किप्सन अनुसार व्यवसायीले बिक्री वितरण गर्दा पनि कारबाहीको भागिदार हुनुपरेको उहाँको भनाइ छ । फुड सप्लिमेन्ट संसारभरको प्रयोग भएको भएपनि नेपालमा भने असहजता भएको पनि शर्माले बताउनुभयो ।
नेपाल फार्मेसी परिषद्का रजिष्ट्रार सञ्जिव कुमार पाण्डेले औषधी ऐन र औषधी ऐनले व्यवस्था गरेको नीति, नियमावलीमा टेकेरै औषधी व्यवस्था विभागले कारबाही गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
नेपाल चिकित्सक संघका सभापति डा. लोचन कार्कीले चिकित्सकहरुले आवश्यकता अनुसार प्रेस्किप्सन लेख्न पाएपनि सरकारका दुई निकायको फरक फरक कुराले चिकित्सकहरु प्रतिबन्धित भन्ने कि नभन्ने भन्नेमा अन्योलमा रहेको बताउनुभयो । चिकित्सकले गलत तरिकाले लेखे सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्न सक्ने पनि कार्कीले बताउनुभयो ।